नेपाली मुलकी बेलायती युवती भन्छिन् ‘सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिए भुस्याहा कुकुर व्यवस्थापन गर्छु - eNepal
नेपाली मुलकी बेलायती युवती भन्छिन् ‘सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिए भुस्याहा कुकुर व्यवस्थापन गर्छु
नेपाली मुलकी बेलायती युवती गंगा थापा मगर तीनसाता पहिले नेपाल घुम्नका लागि आएकी थिइन्। उनी नेपालमै जन्मिए पनि जन्मिएको १५ दिनमै बेलायत गइन्।त्यही कारण आज उनलाई नेपाल आफ्नो तर अनौठो लाग्छ ।यहाँ का धेरै कुराहरु उनको मनमा बसेका छन्, अनि केही कुरा मनमा बिझेका पनि छन् । गत साता उनी नेपाल भ्रमण सकेर फर्किन् । यहाँ दुई हप्ता बस्दा केही अठोट पनि गरिन् गंगाले।नेपालमा जताततै भुस्याहा कुकुरहरु छाडा छोडेको देखिन्। त्यो उनलाई मन परेन्। बेलायतमा कुकुरलाई राम्रो स्याहार गरेको देखेकी उनलाई दया जाग्यो। ‘यी कुकुरहरुले के खाँदा हुन् ? कहाँ बस्दा हुन्, कति अप्ठेरो भएको होला’, गंगाले भनिन्, ‘अब म काठमाडौँका भुस्याहा कुकुर व्यवस्थापन गर्छु।’‘कुकुर व्यवस्थापन गर्न के गर्न सकिन्छ ? नेपालमा नीति के छ ? सरकारले यसका लागि के सहयोग गर्न सक्छ ?’गंगाले सोधिन्।
त्यसपछि उत्तर पनि निकालिन् ‘सरकारले मलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदियो भने म उनीहरुलाई बस्ने घर बनाइदिन्छु र खानाको पनि व्यवस्था गर्छु।’गत साता बेलायत फर्किंदै गर्दा उनको अठोट यति मात्रै थिएन। काठमाडौँको धुलो र फोहोर पनि व्यवस्थापन गर्ने योजना छ उनीसँग। तर काम गर्ने नेपालमा काम गर्ने कसरी ? सरकारले दिन्छ कि दिँदैन यो चासो र चिन्ता पनि छ।यी दुई योजना सार्वजनिक गरेकी गंगाले भनिन्–त्यसका लागि आर्थिक श्रोत म बेलायतमा जुटाउँछु, मलाई यहाँ मात्रै काम गर्ने वातावरण पाउनु पर्यो। यस पटक उनी बेलायत फर्किए पनि चिनजानका साथीहरुलाई, आफन्तलाई बुझ्न लगाएको छिन्। यदि काम गर्न स्वीकृति पाए चाँडै नेपाल आएर काम गर्ने गंगाले सुनाइन्।अहिले उनीहरु बेलायतका नागरिक भएपनि गंगालाई नेपालको मायाले तानिरहन्छ।
बुबाको जागिर उतै भएकाले बेलायत बस्ने गंगाका परिवार विस्तारै बेलायतकै नागरिक बनेका हुन्। बेलायतमा बसेपनि उनीहरुमा नेपालप्रतिको छाप भने हटेन। अहिले गंगा बेलायतमा पढाइसकेपछि त्यहीँ अधिवक्ता छिन्।आफू हुर्किंदै जाँदा नेपालसँगको नाता चुडिंदै गयो। तर अहिले जोड्न कोसिस गर्दैछिन्। उनले भनिन्, ‘म नेपालको छोरी हो, मलाई नेपालको धेरै माया लाग्छ। मेरो सानैदेखिको चाहना हो सरसफाई र जनावरहरुको धेरै माया लाग्छ, त्यसमा पनि कुकुरको झन धेरै माया लाग्छ। म पहिलो चरणमा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न चाहन्छु’, प्रस्टसँग नेपाली बोल्न नजान्ने गंगाले नेपालीमै सुनाउने कोसिस गरिन्,‘यहाँ मान्छेले कुकुरलाई माया गर्दैनन् रहेछन् । कुट्छन् यो नराम्रो हो । हामीले सबै जनावरलाई माया गर्नुपर्छ ।’यो उनको पहिलो नेपाल यात्रा होइन। चार वर्ष पहिले पनि नेपाल आएकी थिइन्। तर त्यतिबेला नेपालका धेरै ठाउँ घुम्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि समय मिलेन। यसपटक उनी चितवन, पोखरा, लुम्बिनी र बुटवल पनि पुगिन्।
The Ron J Foundation द्वारा नेपालमा रहेका बालबालिकाहरुलाई सहगोग।
फेरी स्कुल जान पाए…….